Fikrad kooban, World Church of God Switzerland (WKG)
FIKRADO DEGDEG AH
Axdiga Cusub dhexdiisa waxaa ku yaal hal aayad wanaagsan oo rasuul Bawlos ku qoran wuxuu ka hadlaa iskutallaabta Masiixa in ay nacasnimo u tahay Gariigta iyo buuq ku haynta Yuhuudda (1 Korintos 1,23) , Way fududahay in la fahmo sababta uu u samaynayo bayaankan. Ka dib oo dhan, sida laga soo xigtay Giriiggu, casriyeynta, falsafada iyo waxbarashadu waxay ahaayeen baadi goob sare. Sidee qof iskutallaabta lagu qodbay u gudbiyayo aqoonta gabi ahaanba?
Waxay ahayd qaylo iyo rabitaan xor ah xagga maskaxda Yuhuudda. Taariikhdooda oo dhan waxaa lagu weerarayay awoodo fara badan oo had iyo jeer lagu ceebeeyo awoodaha haystay. Haddii ay tahay reer Ashuur, reer Baabuloon…
Tani ma tahay toobadkeenida Masiixiyiintu u egyihiin? Masiixiyaddu waa mid ka mid ah dariiqooyinka badan ee lagu raadsado horumar xagga akhlaaqda ah? Masiixiyiin badan waxay u muuqdaan inay rumaystaan ​​in quduusnimadu ay la mid tahay dembi la'aanta. In kasta oo aanay taasi gebi ahaanba khaldanayn, haddana aragtidanu waxay leedahay mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee looga gaabiyo. Daacadnimadu waa ...
Fiqiga fiqi ahaaneed ee Thomas Torrence ayaa sidan u dhigay: "Waxay ahayd sababtaas awgeed inuu Ciise Masiix dhintay ...